Ungawafihla kanjani ngokushesha noma ubonise amafayela ku-MacOS ngesinqamuleli sekhibhodi | Ngivela kwa-mac
Ungawafihla kanjani ngokushesha noma ubonise amafayela kuma-macOS ngesinqamuleli sekhibhodi
Njengomthetho ojwayelekile, amasistimu wokusebenza afihla uchungechunge lwamafayela ngesizathu esithile, okungekho okunye ngaphandle kokuzama ukuvimbela abasebenzisi ukuthi bangawafinyeleli kanye nohlelo lokusebenza ukuthi lonakaliswe, kepha akusona ukuphela kwesizathu. Uma sabelana nge-Mac yethu nabanye abantu futhi singenalo uhlelo lokulawula umsebenzisi, kungenzeka ukuthi sinesifiso sokufihla amanye amafayela.
Uma imvamisa siphoqelelwa ukusebenza nalezi zinhlobo zamafayela, mhlawumbe ukhathele ukusebenzisa imenyu ephezulu ukufihla futhi ubonise amafayela wohlelo afihliwe. Ngenhlanhla i-macOS isinikeza ukufinyelela okuqondile ngokuhlanganiswa kokhiye ukuze sikwazi ukufihla noma ukukhombisa lezi zinhlobo zamafayela.
Ukuze sisebenzise le ndlela, sidinga ikhophi lethu le-macOS ukuthi lilingane noma liphakeme kune-MacOS Sierra, ukuze noma iyiphi inguqulo ephakeme nayo ihambisane nale ndlela enqamulelayo yekhibhodi. Uma umbono wethu ungewona ukufihla amafayela ukuze kungabikho muntu ongafinyelela kuwo, akufanele sizame ukufinyelela kulezi zinhlobo zamafayela, ngoba agcinelwe abasebenzisi abasezingeni eliphakeme, ngoba njengoba ngishilo ngenhla, noma yikuphi ukuguqulwa kungathinta ukusebenza kwethu iqembu.
Veza / Fihla amafayela afihliwe ku-MacOS
Njenganoma iyiphi inhlanganisela yekhibhodi esivumela ukusheshisa umsebenzi otholakala kumamenyu, le nhlanganisela yokhiye idinga ukucindezelwa okhiye ngokulandelana Shift + Command +.
Yebo, inhlanganisela yokhiye idinga ukuthi sicindezele izinkinobho ze-Shift, ukhiye we-Command. nephuzu. Njengoba senza leyo nhlanganisela yokhiye, wonke amafayela afihliwe ku-Finder izokhonjiswa noma ifihlwe kuye ngesimo lapho zikhona lapho senza inqubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Ungawafihla kanjani ngokushesha noma ubonise amafayela kuma-macOS ngesinqamuleli sekhibhodi
Yebo, sesivele sinezisekelo zokuqala ezivela eceleni ukuze i-HomePod ingaklwebhi itafula
I-Apple ivuselela "iCarpool Karaoke" futhi kuzoba nesizini yesibili